Ebe iri nri na ihe ọrinkụrinkụ
Ire ma nụ ụtọ
Ihe oriri na ihe ọrinkụrinkụ na Kildare
Omenala nri na ihe ọ Kilụ drinkụ nke Kildare na -eme nke ọma. Site na ụlọ nri, ụlọ mmanya, gastropubs, obere ebe a na -ere mmanya na ebe a na -ere kọfị, ógbè ahụ na -eguzobe onwe ya dị ka otu n'ime ebe nri kacha atọ ụtọ na Ireland.
Ebe ị gara nwere ike ịkọ akụkọ dị ka nri n'onwe ya. Na Kildare, ụbọchị ịpụ apụ nwere ike ịgụnye Irish zuru oke site na obere cafe dị jụụ, azụ na ibe sitere na bistro n'akụkụ ọwa mmiri, nri ehihie a na-etolite n'ụlọ n'ọba Scandinavian, ma ọ bụ ihe oriri mara mma na mbara ụlọ. Na mgbede, ọkachasị n'obodo anyị na obodo anyị, nwere ike iburu gị ebe ọ bụla site na mmanya oyster gaa n'ụlọ oriri na ọ Micheụ Micheụ Michelin, ụlọ oriri na ọ countryụ countryụ obodo, ebe a na-ekpo ọkụ, ma ọ bụ ebe enyi na enyi na-ahụ anya ọwa mmiri. Echefukwala ịnụ ụtọ ihe ọ craftụ craftụ nka - ma ọ bụ abụọ - n'ụzọ.
Nke a bụ echiche: kwụsị ịgụ gbasara ihe ọma niile a dị ịtụnanya, bịa ebe a detụ ya n'onwe gị.
Votu: Kilgbọ kacha mma Kildare
Kildare na-asacha elu na onyinye nri
Onyinye nri nke Kildare nyere 'Restaurant nke Afọ'
Ndụmọdụ oge okpomọkụ